Mirgi Namoomaa dhibamtoota sammuu sarbamaa jiraa? - BBC News Afaan Oromoo
Mirgi Namoomaa dhibamtoota sammuu sarbamaa jiraa?
'Dhibamtoota sammu cancalaan hidhanii yaaluun baramaa dha'
Itoophiyaa keessatti dhibeen sammuu aadaanis ta'e amantaan seexana yookan hafuura hamaan wal qabsiifama. Kanarraa kan ka'ees yeroo baay'ee dhukkubsattoonni saammuu reebicha, dararaa, hidhaafi rakkoolee gara garaaf yoo saxilaman mul'ata.
Namootni dhibee sammuu qaban gara manneen yaalaa kan deemanis erga bakkeewwan amantaa gara garaa dhaqanii fayyuu dhabanii booda ta'uu dubbatu Yuunivarsiitii Finfinneetti Asooshiyeet Pirofeesar kan ta'aniifi hospitaala Amanu'eelitti waggoota 12'f hakiima ta'anii kan tajaajilan Dr. Yoonaas Baahire-Xibeb.
Dhibeewwan sammuu 360 ol jiraachuu kan dubbatan Dr. Yoonaas, hawaasni dhibee sammuu kan baru erga sadarkaa olaanaarra gahee dhibamaan ofiisaafi namoota biro irraan miidhaa geessisuu eegalee booda jedhu.
Kunis dhibamtoota sammuuf itti gaafatamummaa kan fudhatan dhaabbileen dhunfaas ta'e mootummaa waan hin jirreefi jedhu.
"Adeemsa kana keessa dhibamtoonni kunneen miidhaan irra gaha beela, dheebuu, cancalaan hidhamuu, reebamuufi gidiraa biraafis saaxilamu," jedhu.
Dhibamtoonni sammuu mana yaalaa galanis rakkoon wal fakkaataan akka irra gahaa jiru qorannoon Ogeessa seera kan ta'an Obbo Anteneh Debbebe ni mul'isa.
Seerri addatti mirga dhibamtoota sammuu tiksu hin jiru kan jedhan Obbo Anteneh, halli keenniinsa tajaajila fayyaa manneen yaalaa mirga namoomaa dhibamtoota kan sarbudha jedha.
'Elektiroo Konvalsiiv Teeraappii'
Elektiroo Konvalsiiv Teeraappiin yaala dhibamtoota sammuu sadarkaa qoricha, nyaataafi dhugaatii fudhachuu hin dandeenyerra gahaniif kennamu yoo ta'u qoricha hadoochuufi elektiriikiin rom'isiisutu waliin kennama.
Kunis akka dhukkubsattoonni kunneen wayita dammaqan nyaataafi qoricha fudhatan isaan gargaara.
Yaaliin kun wayita kennamu humna elektirikaa cimaa waan dabarsuuf rakkoo irraanfachuu hanga dhumaatti turuu danda'uuf isaan saaxila kun ammo mirga namoomaa kan sarbu ta'uu dubbatu Obbo Anteneh.
Faallaa kanaatiin yaaliin kun lubbuu kan baraaru ta'uu kan dubbatan Dr. Yoonaas, akkuma yaalawwan biroo miidhaa xixiqqo fidu qabaachuu mala garuu namaa nyaataafi dhugaatii dhaabee du'atti adeemaa jiruuf rakkoon waa irraanfachuu yeroo gabaabaaf isa mudatu hagas mara yaaddessaa miti jedhu.
Dhimmamtoonni mirga namoomaa gosa yaalaa kana kan mirga dhibamaa sarbudha jechuun balaalleffatu.
"Gidiraafi dararaan yaalamuun waan dhala namaaf malu miti, dhibamtoonni kunneen hayyamamoo ta'uu isaanii adda baasuun waan hin danda'amneef, rakkoon waa yaadachuu dhabuu akkasumas sammuu isaaniirra miidhaan akka gahu hin beekan," jechuun mormu Obbo Anteneh.
Dhimmamtoonni mirga namoomaa kana haa jedhan malee, filannoon jiru du'aafi yaala kana argatanii lubbuun turuudha jedhu Dr. Yoonaas.
Haalli dhibamtoota sammuu jiddugala yaalaa gara garaa keessa jiranii hidhamuu irraan adda miti jechuun kan falman Obbo Anteneh, dhibamtoonni kun hedduun humnaan kan qabamanii dhufan ta'uu dubbatu.
Kanneen hayyama kennuu hin dandeenye akkuma jiran kan of beekaniifi hayyama gaafatamuu osoo qabanii humnaan qabamanii achi galan jiru jedhu.
Waa'een yaala isaanii akka itti hin himamne darbees jiddugalawwan yaalaa sammuu akka Gafarsaafi hospitaala Amanu'eel keessatti harki miilli isaanii hidhamee kan socho'an jiraachuu arguu dubbatu Obbo Anteneh.
Jiddugala yaala fayyaa Gafarsaa keessatti dhibamtoonni 20-30 ta'an kutaa tokko keessa akka jiraatanifi kaan wayita iyyan warren foyyee qaban ammo uffata halkaniin akka isaan hidhan akkasumas halkaniin akka gadi ari'anillee taajjabuu isaanii kunimmoo sarbama mirga namoomaati jedhu.
Dhibamtoonni sammuu wayita ofii isaaniifi dhibamtoota biro irra miidhaa geessisuuf yaalan hanga tasgabbaa'aniitti hidhamuu danda'u kan jedhan Dr. Yoonaas kun nama hin beeknef mirga dhibamaa sarbuu itti fakkaachuu mala jedhu.
Kana jechuun rakkoon hin jiru jechuu akka hin taaneefi kunis mootummaan dhukkuboota daddarboo akka Busaa fi HIV'f qofa xiyyeeffannaa waan kenneefis jedhu.
Kun kan qeeqamuu qabu garuu ilaalcha biyyoota lixaatiin osoo hin taane haala biyyattiin keessa jirtu ilaalcha keessa galchuun ta'uu qaba jedhu.
"Nama karaarraa lafee funaanee nyaatu, hidhanii sooruun rakkoo hin qabus," jedhu.
Obbo Anteneh gama isaaniin fayyaan argamus mirgi namoomaa sarbamuu hin qabu, qajeeltoowwan seeraa kana dhorkanis wixineeffamuu qabu jedhu.
'Saadiyoo Maaneen maashiniidha' - Yargan Kiloopp
Oppireeshinii Marsabiitiin namoonni to'annoo jala oolan Mana Murtii dhiyaatan
11 Caamsaa 2022
Hidhataan Ameerikaa 'namoota gur'aacha ta'an adda baasee ajjeese'
Yeroo dhuma kan haaromfame: 12 Caamsaa 2021
'Kana caala boonni natti dhagaahamu hin jiru'- Leenjisaa Yargaan Kiloop